ကျနော်တို့ယခုအပတ် raffling သော Rowenta Smart Force Essentials များထဲမှအနိုင်ရရှိ! | Gadget သတင်း
Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် | | ပြိုင်ပွဲ, ယေဘုယျ
ကျွန်တော်တို့ဟာ Actualidad Gadget မှာဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုသရေကျပြီးကတည်းကအချိန်အတော်ကြာပြီ။ ဒီနေ့မှာငါတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်အထူးမဲနှိုက်စရာရှိတယ်။ ဒီအိမ်မှာဆန်းစစ်ထားတဲ့ကြမ်းပြင်အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် Smart Force Essentials နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rowenta စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ယူရို ၃၀၀ နီးပါးတန်ဖိုးရှိသောဤကုန်ပစ္စည်းကိုသင်၏လုံးဝအခမဲ့ယူနစ်မပါဘဲမနေလိုပါ။ ဒါကြောင့်ဒီ Post ကို ၀ င်ပြီး Actualidad Gadget မှာအမြဲတမ်းလိုပဲဒီ Rowenta Smart Force Essential အတွက်မဲနှိုက်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်မတူညီသောနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေရန်အချိန်တန်ပြီ။
ပထမဆုံးအချက်ကဘယ်လိုပါ ၀ င်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့ဖြစ်တယ်။ မင်းမှာနည်းလမ်းသုံးခုရှိတယ်။ Twitter၊ Facebook နှင့် Instagram တို့ဖြစ်သည်။ သင်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာအရေအတွက်များများကိုသင်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားလေလေ၊ သင်ပိုမိုလွယ်ကူလေ၊ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုစီသည်။
ဒီ Rowenta Smart Force Essential ကိုအခမဲ့ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ Twitter တွင်စတင်ခဲ့ပြီး၊ ဤထုတ်ဝေမှုကို RT ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နောင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ raffle သော Force Essentials နှစ်ခုအနက်တစ်ခုကိုအဘယ်ကြောင့်အနိုင်ရသင့်ကြောင်း HT #RowentaMeLimpia ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားနောက်ပိုင်းတွင်ပြောပြရန်။ သင် @ActualidadGadget နှင့် @Rowenta_es တို့ကိုလိုက်နာရမည်
မနက်ဖြန်မနက် ၁၀း၀၀ တွင် စ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီဖြင့်သင်ပြုလုပ်သောသရုပ်ပြပွဲတွင်သင်ပါ ၀ င်နိုင်သည် @Rowenta_ES.
မင်းမှာ Smart Force မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Model နှစ်ခုကိုအခမဲ့ရရှိမှာပါ။
1 RT- RT ကိုလုပ်ပြီး hastagh နှင့်ဖြေပါ #RowentaMeLimpia
- Gadget သတင်း (@agadget) ဇြန္လ 17, 2018
သင်လည်းပါ ၀ င်နိုင်သည် Facebook က, ၎င်းအတွက်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ချန်ထားခဲ့သည့် post ကိုသာမှတ်ချက်ပေးရန်လိုသည်။ #RowentaMeLimpia hashtag နှင့်သာမှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်သင်၏နံရံပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ဝေမှုကိုမျှဝေရန်သာဖြစ်သည်။
မနက်ဖြန်မနက် ၁၀း၀၀ တွင် @ Rowenta_ES နှင့်သင်လုပ်ဆောင်သောကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင်သင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ကတင် Gadget သတင်း en တနင်္ဂနွေ, ဇွန်လ 17, 2018
နောက်ဆုံးတော့ Instagram ကိုအပေါ် သင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကိုရေတွက်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရန်နှင့် @Rowenta_ES သို့မဟုတ် @ActualidadGadget ကိုးကားရန် hastagh #RowentaMeLimpia ဖြင့်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
Instagram မှာပါ ၀ င်ချင်ပါသလား။ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ ၁- ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့ ၂- ဤပုံကို Hashtagh #RowentaMeLimpia နှင့် @actualidadgadget နှင့် @rowenta_es အားပုံတစ်ပုံတွင်မျှဝေပါ Facebook နှင့် Twitter တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ တနင်္လာနေ့ ၂၅ တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် #sorteos #gratis #rowenta #tecnologia #gadgets ကိုအနိုင်ရလိမ့်မည်။
အားဖြင့်မျှဝေတစ်ဦးက post ကို နည်းပညာ - ဘလော့ဂ်သတင်းများ (@actualidadgadget) ပေါ်မှာ ဇွန် 17, 2018 မှာ 10: 57am PDT ရန်ကုန်
ဤထူးခြားချက်များနှင့်အတူထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုအနိုင်ရရန်ဘယ်လောက်မျှမလွယ်ကူခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်စက်၏လက်မှရုန်းထွက်နိုင်သည့်စိတ်ကူးစက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်တစ်လုံးရရှိရန်အလွယ်တကူပူးပေါင်းပါ ၀ င်ပါ။ Rowenta ။ သငျသညျပြည့်စုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ချင်လျှင်, ငါတို့သည်သင်ကထားခဲ့ပါ ဒီမှာလူတိုင်းအတွက်ကံကောင်းပါစေ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » ကျနော်တို့ယခုအပတ် raffling သော Rowenta Smart Force Essentials များထဲမှအနိုင်ရရှိ!
ခရီးသည်နှစ် ဦး ကိုသယ်ဆောင်နိုင်သောလျှပ်စစ်စက်ဘီး CUCA